阿斯劳 akanyora nandrolone decanoate .
Deca Durabolin, anowanzonzi anongodaidzwa kuti "Deca", izita rezita reNandrolone decanoate (C28H44O3), anabolic steroid iyo inovandudza mashandiro nekuwedzera simba uye simba, kuderedza kuneta kwemhasuru, uye nekuwedzera zvakanyanya mhasuru kukura. Inopa mibairo mikuru nekufamba kwenguva iine mashoma mhedzisiro kana ikashandiswa zvine mutsigo. Kutenda kune dzakasiyana siyana doses dzinoshanda, […]
Maitiro Ekugadzira Anopedza Testosterone Cypionate Kubva kuRaw Steroid Poda
阿斯劳 akanyora Testosterone cypionate .
Munzvimbo yekuvaka muviri, kune inopisa-inotengesa steroid-Testosterone Cypionate poda, iyo inobatsira kuvaka mhasuru uye kusimbisa mapfupa, anoshandiswawo kurasikirwa kwemafuta uye kukurudzira bonde. tenga steroid poda mbishi nekuda kwemutengo wayo wepasi uye kwete nzira dzakaomarara dzekugadzira.Nhasi tiri pano kuzogovana […]